Global Voices teny Malagasy » Nosarahan’ny fandrendreham-bahoaka, Miomana Amin’ny Fifidianana Filoham-pirenena Fihodinana Faharoa ny Fiaraha-monina Tsheky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Febroary 2018 17:46 GMT 1	 · Mpanoratra Jan Lockenbauer Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Repoblika Tseky, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Ny kandidà filoham-pirenena Tsheky Miloš Zeman sy Jiří Drahoš. Saripika Wikipedia avy amin'i OISV  sy i Jindřich Nosek (NoJin) , CC BY-SA 4.0.
Niteraka firehetan'ny adihevitra teo amin'ny olom-pirenena, na antserasera na andalambe ny fifidianana. Efa voafaritry ny Lalampanorenana  ny fahefana efa voafetra tanteraka ato amin'ity repoblika parlemantera ity, saingy tsy mampihena ny fisarasarahana efa misy eo amin'ny firenena ity fifidianana ity.
Nandray anjara be dia be tamin'ny fampisaraham-bazana ara-tsosialy i Miloš Zeman  nandritra ny fehim-potoana niasany tamin'ny fomba fanaony tsy manana antra manoloana ny mpifaninana aminy sy ny fihetsiny mandrendri-bahoaka manoloana ny mpanohana azy.
Araka ny fitsapan-kevitra natao talohan'ny fifidianana  mitondra ny lohateny hoe “Inona no vakian'ny mpifidin'ny kandidà ?” Maro an'isa amin'ny mpamaky ireo habaka aterineto hafa mpampahalala vaovao izay tsy fantatra mazava ny mpamatsy volany, ary heverina ho ireo mpampiely ‘vaovao faikany’ prô-rosiana  ny mpanohana an'i Zeman.
Mampahatsiahy ny fifandraisana manahirana  misy eo amin'i Zeman sy i Rosia ny mpisera Twitter iray :
Mandranitra nasionalisma ny fampahafantarana avoakan'ny tranonkalam-baovao toy ny aeronet.cz/news , parlamentnilisty.cz  ary euportal.cz , mampirona be dia be mankany amin'ny fahaleovantena ara-politika sy ara-miaramilan'ny Repoblika Tsheky manoloana ny Vondrona Eoropeana UE sy ny OTAN. Asehon'ireo tranokala ireo ho mpampihorohoro islamista atahorana ireo mpitsoa-ponenana noho ny ady avy any Afovoany Atsinanana sy ireo mpitsoa-ponenana noho ny tsy fananana avy aty Afrika Atsimon'i Sahara.
Tamin'ny taona 2014, maro ireo mpanao gazety no nitsikera an'i Zeman sy ny fitongilanany mankany atsinanana eo amin'ny politika ivelany, sy ny fampiasany teny tsy maontona  amin'ny radiom-panjakana tsheky. Novaliany tamin'ny fanapahan-kevitra tsy hiantsafa afa-tsy amin'ireo tranonkalam-baovao mpisolo sy ireo gazety tia manaitaitra izany, amin'ny filazany fa “hena lò am-bifotsy ” ny fahitalavi-panjakana. Any amin'ny fahitalavitra tsy miankina hatrany izy no mandray fitenenana amin'ny fandaharany fahitalavitra.
Any amin'ny fantsom-pifandraisany i Zeman no manondro vondron'ny mpanohitra azy tsy nofaritany mazava ho “café de Prague” , mamelona fijery ny manampahaizana liberalin'ity tanandehibe ity ho mitomotoe-poana mandritra ny andro any amin'ireo fisotroana kafa ary mody maneho fahazakana ny hafa fotsiny.
Mampiasa ny “Café de Prague” ny hiringiriny mpanohana an'i Zeman ho fomba fiteny hanondroana ireo artista malaza, mpiantsehatra, mpampianatra sekoly ambony, manampahaizana ary ireo rehetra nitsikera ampahibemaso an'i Zeman. Ampiasaina ihany koa ny fomba fiteny ilazana izay rehetra manohy ny lova navelan'i Vaclav Havel , filoha teo aloha maty tamin'ny taona 2011 izay nampilahatra ny firenena hiaraka amin'ny soatoavina sy soatoavina tandrefana taorian'ny faharavan'i Firaisana Sovietika . Mifangarika amin'ny fomba fijery miompana manontolo amin'ny resaka toekarena ananan'i Zeman ny politika ivelany mifototra amin'ny zon'olombelona ananan'i Havel.
Tsy dia fanta-daza loatra i Jiri Drahoš  ary tsy mbola nanana fitantanan-draharaha ara-politika mivantana ankoatra ny valo taona naha-filohan'ny Akademian'i Siansa azy. Amin'ny maha-mpahay shimia azy dia manana patantim-pamoronana maro izy ary malaza ho mipiripirina sy manaja olona fa tsy manana fisongadinana. Mino ny mpanohana azy fa hitondra tsy fitongilanana sy fahaiza-manaja tena izy raha mitondra eo.
Mpisera iray hafa indray maneso ny kabary mandrendri-bahoaka sy mankahala mpifindra-monina an'i Zeman amin'ny fampahatsiahivana ilay mpikatroka maha-olompirenena Okrainiana iray mitanjaka toy ny hifandona tratra amin'i Zeman  sady nihiakam-panoherana tao amin'ny biraom-pifidianana  tamin'ny 15 janoary. Hita ho tohina sy tsy nahahetsika i Zeman raha iny vonona ny handrotsa-bato iny indrindra:
Nahoana ny café i.e. fikambanana tsy mitady tombontsoa, i.e. ny globalistan'i Soros, no tsy mahazaka an'i Zeman? Nahoana ry zareo no nanendry shimista “mpanaja olona fatratra”, izay tsy te-ho filoha na oviana na oviana? Angamba tian-dry zareo ny hamotika ny Vondrona Visegrád  mba tsy ahafahantsika firenena komonista taloha miaro antsika amin'ny jadon'ireo manampahefanan'i Alemaina sy Bruxelles.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/09/114411/
 tamin'ny fampisaraham-bazana ara-tsosialy i Miloš Zeman: https://www.rappler.com/world/regions/europe/193574-east-west-clash-czech-vote-president
 fitsapan-kevitra natao talohan'ny fifidianana: https://www.lidovky.cz/dna.aspx
 heverina ho ireo mpampiely ‘vaovao faikany’ prô-rosiana: http://neweasterneurope.eu/2017/11/08/ins-outs-czech-disinformation-community/
 fifandraisana manahirana: http://praguemonitor.com/2017/09/12/respekt-role-zemans-aide-nejedl%C3%BD-crucial-unclear
 fampiasany teny tsy maontona: https://www.praguepost.com/czech-news/42447-zeman-cannot-control-himself-analysts-say
 hena lò am-bifotsy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Milos-Zeman-pro-PL-CT-je-zkazene-maso-a-hlasna-trouba-porad-Kalousek-A-je-drza-at-mlci-Matej-Hollan-je-blazen-a-s-temi-100-Kc-v-nemocnici-je-to-jinak-476085
 vondron'ny mpanohitra azy tsy nofaritany mazava ho “café de Prague”: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/jan-horn-t/prague-caf-brief-incursion-into-czech-presidential-discourse
 Vaclav Havel: https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
 taorian'ny faharavan'i Firaisana Sovietika: https://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union
 mpikatroka maha-olompirenena Okrainiana iray mitanjaka toy ny hifandona tratra amin'i Zeman: http://www.youtube.com/watch?v=yaNZ3xuT6HM
 nihiakam-panoherana tao amin'ny biraom-pifidianana: https://www.reuters.com/article/us-czech-election-president-incident/topless-woman-shouts-zeman-putins-slut-at-czech-president-during-vote-idUSKBN1F11X7
 Vondrona Visegrád: https://en.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1d_Group